Ahoana ny fomba handefasana hira na hitahirizana ireo voaray avy amin'ny WhatsApp | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba fandefasana hira na hitahirizana ireo voaray avy amin'ny WhatsApp
Pablo Aparicio | | Fampiharana iPhone, Fampianarana sy torolàlana
Hatramin'ny omaly dia afaka mandefa sy mandray antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny WhatsApp isika fa tsy mila azy ireo ho PDF na mila manova azy ireo amin'izany endrika izany. Noho ity zava-baovao ity dia afaka mandefa Word, Excel, PowerPoint na antontan-taratasy tsotra izahay. Ary tsy izany ihany, fa afaka mandefa hira koa isika, zavatra izay farafaharatsiny izaho, izay nampiasa ny fampiharana Music Native dia tsy mbola nanao. Te hahafantatra ny fomba mandefa sy misintona ireo hira voaray amin'ny WhatsApp? Mamakia hatrany.
Voalohany indrindra dia tiako ny milaza fa efa nanao fikarohana kely aho ary nahita fa afaka alefa amin'ny alàlan'ny WhatsApp mandritra ny fotoana lava ny hira, saingy mampiasa rindranasa hafa sy fomba lafo kokoa. Eto koa izahay dia hampianatra anao ny fomba andefasana azy ireo amin'ny alàlan'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo, saingy izao dia tsotra kokoa ny zava-drehetra. Hatoronay anao koa ny fomba tahirizo ao amin'ny iPhone-nao hahafahana mamerina azy ireo na dia mamafa ny chat azonao ireo aza ianao. Manana ny fampahalalana rehetra etsy ambany ianao.
1 Ahoana ny fandefasana hira amin'ny WhatsApp
1.1 Miaraka amin'ny Workflow (karama)
1.2 Miaraka amin'ny Documents 5 (maimaim-poana)
1.3 Avy amin'ny rindranasa hafa
2 Ahoana ny fampidinana hira voarain'ny WhatsApp
Ahoana ny fandefasana hira amin'ny WhatsApp
Miaraka amin'ny Workflow (karama)
mandefa hira ao amin'ny .mp3 na m4a (endrika hafa mbola tsy nandramako) tena tsotra. Ny zavatra voalohany ilainay dia ny fananana ireo hira amin'ny tranonkala iray ahafahantsika mizara an'ity karazana atiny ity, toy ny fampiharana VLC maimaim-poana. Saingy misy ny rindranasa ahafahantsika manao ny zava-drehetra ary hatoro anao foana ny fividiananao. Ity dia Workflow, avy aiza no ahafahantsika mamerina indray ireo hira ananantsika amin'ny fampiharana mozika teratany. Ny fizotry ny fandefasana hira amin'ny alàlan'ny WhatsApp amin'ny alàlan'ny Workflow dia toy izao:
Raha ny lojika, raha tsy manana Workflow napetraka isika dia mankany amin'ny App Store ary mametraka azy. Azonao sintonina avy amin'ny ITY FIAINANA ity.
Ankehitriny ianao dia mila ny workflow hamoaka ireo hira avy amin'ny rindrambaiko mozika ary handefa azy ireo. Namorona iray izay anananao aho ITY FIAINANA ity. Tokony hosokafanao ao amin'ny Workflow.
Miaraka amin'ny fampiharana napetraka sy ny workflow sintonina, manokatra Workflow izahay ary mandefa ny workflow Send Music.
Tsotra be ny fampiasana azy: mila mitady ilay hira na hira tiana halefa sy ekena fotsiny isika.
Ny dingana farany amin'ny fizotran'asa sy an'io fomba io dia ny fizarana, izay ahafahantsika mandefa ilay hira amin'ny alàlan'ny WhatsApp sy fomba hafa.
Miaraka amin'ny Documents 5 (maimaim-poana)
Safidy tsotsotra toa ilay teo aloha fa mety ho tsara kokoa satria maimaim-poana dia ny fandefasana ireo hira mampiasa ny fampiharana Documents 5. Tsotra be ity fomba ity ary tsy maintsy hanao ireto manaraka ireto ihany izahay:
Misintona ny Documents 5 izahay raha tsy apetraka izany (Download).
Raha ny lojika dia manokatra Documents 5 isika izao.
Manokatra «iPod Music Library» izahay.
Izao dia mikasika ny «Edit» isika.
Misafidy ireo hira tianay halefa izahay.
Mikasika ny «Open in».
Farany, misafidy "WhatsApp" izahay ary avy eo ny fifandraisana tiana handefasana ilay hira.
Avy amin'ny rindranasa hafa
Raha manana ilay hira ao amin'ny VLC na fampiharana multimedia hafa izahay dia afaka manome anao mivantana hizara sy hisafidy WhatsApp. Saingy toa mahaliana ahy kokoa ny afaka mandefa ireo ananantsika amin'ny iPhone. Raha toa ka misy ny fizarana haino aman-jery multimedia ananantsika ilay hira zaraina (
) fa tsy mamela antsika handefa azy amin'ny alàlan'ny WhatsApp, afaka mampiasa izahay ITY ASA ITY. Io no tsotra indrindra amin'ny rehetra, satria toy ny Mac Preview, mpijery ny karazan-drakitra rehetra, saingy avy aminy no ananantsika safidy fizarana mahery vaika kokoa izay ahafahantsika mandefa hira amin'ny WhatsApp.
Ahoana ny fampidinana hira voarain'ny WhatsApp
Ny lafiny ratsy amin'ny fijerena hira amin'ny WhatsApp dia tsy azo sintonina izy ireo. Tsia? Tsy kely. Misy tetika iray hanampy antsika mitahiry raki-peo WhatsApp. Ity fomba manaraka ity dia tsy ny manintona indrindra ary azoko an-tsaina fa amin'ny ho avy dia tsy ilaina intsony ny mamily lalana be loatra, nefa mandeha. Hataontsika amin'ny fanarahana ireto dingana ireto:
Milalao sy mitazona ilay hira voarain'ny WhatsApp izahay. Ho hitantsika fa miseho ilay safidy «Avereno».
Tsindrio ny «Resend».
Izao dia mikasika ny kisary fizarana izahay (
Avy amin'ireo safidy hiseho dia misafidy «Manampia naoty» izahay.
Manaiky ny naoty izahay, tsy mila omena anarana.
Manokatra ny rindranasa Notes izahay izao ary miditra amin'ilay naoty noforonina.
Milalao sy mitazona ilay hira izahay.
Avy amin'ireo safidy hiseho dia mifidy «Hizara» izahay.
Ankehitriny dia tsy maintsy mikitika ny «Quick View» isika.
Mikasika ny kisary fizarana indray izahay (
Ary farany, tahirintsika ao anaty rindranasa mifanentana ilay hira. Tehiriziko ao amin'ny VLC izany.
Raha milaza aminay ireo hevitra izy ireo, saingy aleoko ampidirina eto ny safidy teratany sy maimaim-poana, raha manana Workflow ianao dia afaka mihazakazaka koa ny Preview Workflow (Quick Look) hitahiry azy na aiza na aiza. Azontsika atao koa ny manomboka ny workflows hafa, izay efa tsapan'ny mpanjifa.
Araka ny hitanao dia tsy fomba tsy misy dingana firy izy io, fa miasa ary mamaha ny fisalasalana aiza ny Audios WhatsApp voatahiry amin'ny iPhone. Ny zavatra ratsy dia nalefa ilay hira ary mitahiry amin'ny anarana lava be, fa ny fampiharana toa ny VLC mamela anao hanome anarana ny rakitra. Ahoana ny hevitrao amin'ireto fomba handefasana sy hamonjy hira ireto amin'ny WhatsApp?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba fandefasana hira na hitahirizana ireo voaray avy amin'ny WhatsApp
Mahaliana ... Misy safidy hafa ve nefa maimaim-poana?
Salama, Anonyme. Ny tianao holazaina dia hoe iraho izy ireo? Araka ny nambarako, ny zava-dehibe dia ny fananana azy ireo amin'ny rindranasa iray izay manana ny fanitarana fizarana. Ohatra, afaka mandefa hira avy amin'ny VLC ianao avy amin'ny bokotra fizarana.
Raha te handefa ireo avy amin'ny roul ianao dia azonao atao ny manandrana iZip (manana kinova maimaimpoana io) izay afaka miditra amin'ny tranomboky mozika. Hanadihady azy aho ary hanampy ny vaovao.
Amboary: tsia, iZip dia tsy mandeha raha tsy miaraka amin'ny Pro version. Ho hitako raha mahita rindranasa hafa manana fidirana amin'ireo hira ao amin'ny tranomboky aho.
Ahitsio 2: Mamela azy ny Documents 5. Ampiako amin'ny lahatsoratra izany.
Jesosy jaime lalaoz dia hoy izy:
Nisy rindranasa efa ela izay miasa ho toy ny mpizaha ary misy mpilalao fahatsiarovana hitahiry ireo hira alaina. Efa hatramin'ny faran'ny iPhone 5 no nampiasako azy, antsoina hoe idownloader izy io, andramo tsara
Mamaly an'i Jesosy jaime gamez
algo dia hoy izy:
Azonao atao ihany koa ny mamerina dropbox miaraka amin'ny workflow fa tsy manome naoty nomarihinao ary raha manana ny fomba fahandro ianao dia azonao atao ny misintona sy mitahiry izany amin'izay tianao.
zavatra iray, manana izany fomba fahandro izany ve ianao hisintona sy hitahiry amin'izay tianao?
Salama marcos. Raha manana ny fampiharana Workflow ianao dia nanampy rohy mankany amin'ny Preview. Io dia fanitarana izay natomboka tamin'ny bokotra fizarana. Raha omenao hizara amin'ny WhatsApp ity, safidio ny "Run Workflow" ary safidio ny Preview, dia ho afaka hijery ilay rakitra ianao, fa ny mahaliana anao dia raha manindry ny bokotra fizarana indray ianao dia ho afaka hanao izay tianao rehetra miaraka aminy, toy ny fitehirizana azy amin'ny VLC, ao amin'ny Dropbox ...
Ḿảṝiō Rōċą dia hoy izy:
Ananako izany, fa ahoana no ampitako azy aminao?
Valio amin'i Ḿảṝiō Rōċą
Pablo Matematika dia hoy izy:
Te hilaza aminao aho fa tiako ny hafatrao. Mahitsy, tso-po ary ilaina. Workflow no fampiharana izay nahatonga ahy hanatsara ny iOS 8 miaraka amin'ireo iPhone 4s misy ahy ankehitriny (izay mbola mitolona amin'ny iOS 9.3). Tsy nahazo topi-maso firy tamin'io tahaka ireo renirano roa ireo izy. Mirary ny soa indrindra.
Valiny ho an'i Matematika Matematika
tia tanindrazana dia hoy izy:
Raha toa ka tsy miseho amin'ny iphone-ntsika ny safidy hanampiana naoty, ahoana no anaovako azy?
Valiny ho an'ny tia tanindrazana
Salama, rehefa miditra amin'ny tranomboky mozika iPhone amin'ny alàlan'ny Documents 5 aho dia tsy mahazo safidy hanovana, noho io. (Manana iphone 5s aho)
AseretRico dia hoy izy:
Misaotra betsaka, vao avy nampiasaiko ary nanampy ahy be dia be
Mamaly an'i AseretRico
Apple dia manana antony an'arivony tapitrisa hahombiazana amin'ny Augmented Reality
Fitiavana isa, boaty Album ary maro hafa, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra